Ereyada faqooqa ee boliisku waxey hoos u dhigi karaan sumcaddooda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dood la xiriirta isticmaalka ereyada faqooqa ee boliiska. Sawirle: Bertil Enevåg Ericson / TT
Ereyada faqooqa ee boliisku waxey hoos u dhigi karaan sumcaddooda
Sumcadda boliiska ayay hoos u dhigeeysaa falalka qaarkood
La daabacay tisdag 12 november 2013 kl 15.38
Doodihii ayaa halkoodii ka sii socda la xiriirey ereyada faqooqa ah oo ey isticmaalaan qaar ka mid ah ciidanka ammaanka (boliiska). Iyadoo markii ugu dambeeysay ey gabar kuu dhaqan magaalada Malmö ay markhaati ka ahayd mar la qabanayey, halkaasina loogu yeeray ereyga liidita ah ee "Jävle blatte". Falalkaasi ayaa ah kuwo hoos u dhigeya kalsoonida ay bulshadu u heeyso ciidanka ammaanka, sida uu sheegay caalimad u warramayay idaacadda caalamiga ah ee raadiyaha Iswiidhen. Carlos ayaa ka hoowl-gala ciidanka ammaanka xarrummihiisa mid ka mid ah ee ku yaala magaalooyinka dhaca bartamaha Iswiidhen, wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa dalka dibaddiisa:
- Aniga qudheeyda waxaan goob joog ka ahaa marar la isticmaaley ereyada faqooqa ee blatte, neger iyo ereyo la mid ah. Dabadeed la yiraahdo: may, anigu maaha cunsuri, adiguna waxaad tahay shakhsi wanaagsan, waxaad ka mid tahay noocyada ugu wanaag-san ee ajaaniibta.
Carlos, ayaa la qariyay magaciisa dhabta ah, iyada oo cabsi uu ka qabo in la soo caddeeyo uu ruux kale akhriyay ereyadiisii. Arrimmaha noocani ah maahan wax ciidanka ammaanka gudihiisa looga hadlo ama looga doodo, sida uu sheegay Carlos:
- May, may, may. Haddaad soo qaaddo waxaad ku sifoobeeysa inaad dadyoowgaa jeceshay (blatteälskare). Ma jirto cid ku dhiiran karta inay ka hadasho faqooqa boliiska dhexdiisa. Iyadoona oo muddo aan dheereyn horteed uu sarkaal madax noo ah igu yiri waxaa wanaag-san inaad ka aamusto. Waayo kolkii aad ka hadashaba waxaa sii kordhaya neceeybka laguu qabo.
Xaaladda Carlos ayay caddaatay in aanu keli ku ahayn koolkii uu caalimmadda Sara Uhnoo oo ku takhasustay culuunta dunuubta ay su’aalo qoto-dheer la yeelatay 21 ka mid ah ciidanka ammaanka, asal-ahaanna ka soo jeeda dalka dibaddiisa iyo nolol maalmeedka shaqadooda. Iyadoo ey qaar badan oo ka mid ahi sheegeen iney falalka noocaasiya ku arkaan xubnaha ciidanka ammaanka oo ey wada shaqeeyaan:
- Waxaan oran lahaa in badankood ey aamin-san yihiin iney jiraan erey-bixinno gaar ah ee shaqada la xiriira. Baaritaannada badankoodna waxey caddeeyeen iney erey-bixinnadaasi ku baah-san yihiin boliiska dhexdiisa, hase yeeshee ey ku kala duwan yihiin 21-kaasi ruux sida ey u arkaan halista ey leeyihiin falalkaasi.
Qaar ka mid ah ayaa qaba in aaney wax halis ah lahayn, maadaama ey ula muuqatey sidiiyoo erey-bixinno madadaallo leh, halka ey qaarka kalena si ka khatar-san u arkaan. Hase yeeshee , si kastaba ha ugu kala duwanaadaane maahan xaalad wanaag-san in ciidanka dhexdiisa laga isticmaalo ereyo faqooq la xiriira, sida ay sheegtay Jenny Sjökvist oo ka howl-gasha hoggaanka ciidanka ammaanka, laantiisa tayada shaqaalaha. Iyadoo intaa raacisay in dhibaatadani tahay mid guud, hase yeeshee ey jirto:
- Waa xaqiiq iney goobaha qaarkood ey sidaa yohiin, waana midda sababta in siyaabo kala duwan aannu u wajahno, haddey noqon lahayd dhanka wareegtooyinka, howl-galka, siyaasadda shaqada, si aannu u muujino habka loo bahan yahay in ciidanka ammaanku ay u howl-galaan.
Madaxa laanta istraateejiyada ee hoggaanka sare ee boliiska Tomas Rosenberg ayaa hadalkiisa u dhigay in hoowlaha maamuuska boliisku ku lammaanan yihiin ama ku dhafan yihiin dhammaan hoowlaha ciidanka ammaanka.
Waxaase caddaatay in maamuuska hab-dhaqanka wanaagsan aanu wada gaarin dhammaan xarumaha ey ka howl-galaan boliiska, sida ku caddaatay baaritaan baaritaan ay sameeysay cilmi-baaraha Malin Wieslander oo iminkadan cilmi-baaris ka wadda jaamicadda Karlstad. Iyadoona daba-gal ku sameeysay ardeyda dhigata xarunta tacliinta sare ee boliiska iyo kolkii ey bilaabeen howl-galkoodii shaqada ee tababarka ahayd. Ardeyda ayaa tacliinta loogu soo dhigay hab-maamuuska dhaqanka, hase yeeshee kolkey ey xarummaha ka howl-galeen ey kala kulmeen xaalad kale:
- Waxey ka bixiyeen goobahaa sawir ah in la liidey hab-maamuuskii la soo baray iyo in lagu tacliimiyey iney fasax ka qaataan wixii loogu soo akhriyey iskuulka.
Hoowl-wadeennada cusub ee ciidanka ammaanka ayaa badankood ogsoonaa waxa lagu magacaabo in fasax laga qaato ”hab-maamuuska wanaag-san”, kolkii ey ka soo laabteen shaqadii qaran ee xarummaha boliiska, sida ay sheegtay Malin Wieslander. Kolka uu goobta ka maqan yahay maamulka ama ey ku kulmaan hoowl-wadeennadu goobo u gaar ah ayey bilaaban dhambaalo in si xor ah loo hadli karo, iyadoona la isticmaali jirey ereyo faqooq ah ama lagu liideyo ajaaniibta tusaale ahaan.
Waxaa dhanka kale halkooda ka sii socda soo shaac-bixidda markhaatiyo in ciidanka ammaanku isticmaaleen ereyo faqooqa la xiriira. Tusaale ahaan intii uu socday kacdoonkii dayrta ee ka dhacay xaafaddaha duleedka magaalooyinka waaweyn ayey soo shaac-baxayeen markhaatiyo fara badan. Halka ay toddobaadkii hore ugu dambeeyn middaasi sheegtay gabar ku dhaqan magaalada Malmö ereyo meel ka dhac ah kolkii la qabanayey goor habeen ah iyada ka soo baxday kalaab looguna yeeray ”jävla blatte” isla-markaana la weeydiiyey in xanaaqeedu ugu wacan yahay ”in bishan la siiyey lacag ka yar middii taageerada ee la siin jirey”.
Mar walba oo cadeeymo noocaasiya soo baxaanba, waxaa hoos u dhaca kalsoonida loo hayo ciidanka ammaanka, sida ay sheegtay Malin Wieslander, iyadoona fikirkaa taageero ay ku siisay aqoon-yahanadda culuunta dunuubta Sara Uhnoo, oo sidoo kale soo ban-dhigtay saameenno kale ee falalkaasi dhalin karaan:
- Waxaa jira howl-wadeenno iyo shaqaale shibil ah ee howsha uga taga sababahaa daraatood.
Ma la socotaa middaa?
- Haa, waan la socdaa. Waa qaar ey sidoo kale wax ka sheegeen, oo ey la noqotay iney taasi ku filan tahay. Halka aan sidoo kale aamin-sanahay in haddii hayadaha wararku ey u soo ban-dhigaan boliiska iney yihiin cunsuriyiin aaney jireyn cid u shaqa raadsata ama goob soo jiidata iney dadku u shaqa doontaan.